Akụkọ - Akpadoro ngwa na-eweli ngwa ọrụ
Ihe mgbakwunye na-ebuli ihe ndị na-atụ egwu bụ ụdị ọhụụ nke teknụzụ ọhụụ mepụtara ngwa ngwa na mmalite nke narị afọ a, nke nwere mmetụta dị mkpa na ọganihu nke teknụzụ iwu na mba m. Ọ na-eme arụmọrụ dị elu ka ọ rụọ ọrụ dị ala, na-agbanwe ọrụ kwụsịtụrụ n'ime arụmọrụ nke etiti. Ọ nwere nnukwu carbon, ọdịnaya dị elu, ma nwee akụ na ụba, nchekwa, ma dị mfe.
Uru ndị ọkachamara:
1. Carbon dị ala
Chekwaa 70% nke nchara nchara
Chekwa ike oriri site na 95%
Chekwaa 30% nke ihe eji ewu ụlọ
Na ọdabara ndị isi ozu nke ụlọ n'elu 45 mita. Ala dị elu karị, akụnụba pụtara ìhè, na ụlọ ọ bụla nwere ike ịchekwa 30% -60% nke ọnụahịa ahụ.
Enwere ike itinye ya n'ọrụ na akụkụ ahụ dị iche iche
Ojiji nke sistemụ njikwa mmekọrịta akpaka na sistemụ njikwa nwere ike igbochi ọnọdụ enweghị nchedo, ma bulie ọtụtụ ụdị diski na-ada ada iji gbochie ọdịda dị ka ọdịda nke ngwaọrụ nrụpụta, nke nwere ike hụ na etiti nchekwa dị mgbe niile na nchekwa ma wee mezuo mgbochi ọdịda.
4. Onye nwere ọgụgụ isi
The microcomputer ibu technology akara usoro nwere ike na-egosipụta na-eweli ọnọdụ na ozugbo na-akpaghị aka na-anakọta ibu uru nke ọ bụla na-eweli igwe ọnọdụ. Mgbe ibu nke ọnọdụ igwe ụfọdụ gafere 15% nke uru a haziri, ọ ga-akpaghị aka ma gosipụta ọnọdụ mkpu dị n'ụdị ụda na ọkụ; mgbe ọ gafere 30%, otu igwe na-ebuli ngwa ngwa ga-akwụsị na-akpaghị aka ruo mgbe ehichapụrụ mmejọ ahụ. Ọ na - egbochi ihe egwu ọ bụla nwere ike ibute ibu ma ọ bụ oke ibu ibu.
5. Nhazi ihe
Ghọta ọrụ nke obere ụlọ na nnukwu ojiji. A na-agbakọta na ala nke isi ahụ nke ụlọ ahụ n'otu oge, jikọtara ya na ụlọ ahụ, wee na-aga n'ihu na-abawanye na mmụba nke ala dị elu. Usoro ọrụ niile anaghị ejide kran ndị ọzọ, nke na-eme ka arụmọrụ nke ọma rụọ ọrụ nke ọma, yana gburugburu ebe nrụọrụ ahụ dị mma karịa, na njikwa na mmezi dị mfe, Mmetụta nke ọrụ mmepeanya pụtara ìhè.
Gbanyụọ ọdịdị ọdịdị nke ọdịnala ọdịnala, mee ka onyinyo nke ọrụ ihe owuwu ahụ dị nkenke na oge niile, ma nwee ike igosipụta nke ọma na ihe ngosi nke ihe owuwu ahụ.
Post oge: Sep-09-2020
Akụkụ Ulo olu nke Ringlock, Nrụgide oru Ringlock Scaffolding, Ringlock Scaffolding mgbodo, Scaffolding Kemeghi ịghasa Jack, Kwikstage Scaffolding Ngwa, Metal Cuplock Scaffolding,